Injineernimada |Waa maxay faa'iidada saamileyda ah ee Jiangxi Rayone Wheels Technology Company Limited?
la socodka badbaadada
Ka dib sanado badan oo cilmi baaris iyo horumarin ah, Rayone Wheels wuxuu ku faanaa inuu yahay mid ka mid ah 10ka warshadood ee ugu sarreeya Shiinaha si ay u soo saarto taayirrada shubka iyo kuwa been abuurka ah gebi ahaanba gudaha guriga.Xarunteedu tahay Fuzhou, Gobolka Jiangxi, Rayone's-art-of-art, xarunta-shahaadadda JWL&VIA waxay leedahay noocyo kala duwan oo mashiinno cusub ah.
Rayone Wheel waxay isticmaashaa 12 mashiin oo CNC ah si ay u soo saarto giraangiraha.Mashiinnada wax-shiidka ee leh xawliga adag iyo dunta birta waxay yareeyaan waqtiyada wareegga waxayna soo saaraan dhammayn fudud.Waxaan sameyn karnaa noocyo kala duwan oo habab adag sida leexinta, wejiga mashiinka, bishimaha goynta dheemanka, daaqada wax lagu shiidayo iyo qaabka bolt iwm.
Waaxda Dahaarka Gacanta
Waaxda Udiyaarin Gacmaha ayaa mas'uul ka ah udiyaarinta giraangiraha dhammayntiisa dambe.Taagerada leh buraashka ama dhammays-tirantay waxay maraan qadar dheeri ah oo gacan-ku-diyaar ah, oo abuuraya muuqaal farshaxan oo kaliya oo ka iman kara gacan aqoon leh.
Mid ka mid ah taxanaheena ugu caansan ilaa maanta.Taxanaha DIM wuxuu soo celinayaa qaabaynta taayirrada caadiga ah kaas oo u fiicnaan doona isboorti, mawqif, ama muuqaal leexleexan.
Goobaha wax soo saarka ee Rayone waxaa ka mid ah xulashooyin kala duwan oo dhameystiran sida dhalaalid dhoobada, cadayashada gacanta iyo daahan budada ah.Dhammaystirka 20-aad ee la heli karo iyo dhammaystirka casaanka / buluugga ah, dhammaystirka sare iyo dhammaystirka daahan Bronze, Rayone ayaa si buuxda u xakameynaya badeecada la dhammeeyey, dammaanad qaadaya tayada gaarka ah iyo saxnaanta taayir kasta oo ka baxa warshadda.
Iyadoo maskaxda lagu hayo motorsport, 620B waxay soo celinaysaa dareen Heritage oo leh farsamooyinka naqshadaynta casriga ah.Waxaa lagu bixiyaa cabbirro kala duwan iyo qaababka boodhka CR1 sidoo kale waxay dabooshaa waafaqid "Big Brake".
Qaar badan oo ka mid ah warshadaha taayirrada alloy waxay isticmaalaan farsamooyinka farsamaynta ugu fudud uguna caansan si ay u kordhiyaan mugga wax soo saarka.Taayirrada Rayone, gaar ahaan taxanaha Rayone Racing, ma dhimaan sifooyinka gaarka ah iyo kuwa kakan ee fududaynta wax soo saarka.
Taayirrada Rayone waxay leeyihiin in ka badan 800 oo caaryaal ah oo caan ah iyo adeegga furitaanka caaryada taageera.Caaryada furan waxay u baahan tahay 30 maalmood oo badanaa habka naqshadeynta wuxuu ku bilaabmaa aqoonsiga yoolka dhammaadka.Nusqaamaha ka jira xariiqa wax soo saarka iyo suuqa labadaba waxay gacan ka geystaan ​​hagida jihada naqshadaha cusub.Waxaan isku daynaa inaan aragno waxa maqan oo aan ka buuxinno meelaha bannaan, sida caadiga ah waxaan ku bilownaa qaabka 3D.
Bishimaha Goynta Dheeman
Muuqaalka wejiga goynta dheemanka ee giraangiraha saxanka qoto dheer, soo koobaya xarrago fudud iyo nadiifnimada naqshadeynta.Haddii aan si sax ah loo helin dhammaan habka wax soo saarka, dhammayntii muraayadda oo kale ee wejiga giraangiraha waa wax aan macquul ahayn.
Gawaadhida Quruxda La Habeeyay
Gaadhi kasta oo sameeyo iyo nooc kastaa waxa uu leeyahay cabbiro kala duwan iyo nadiifin iyo sidoo kale bilicda guud ee kala duwan.Anaga oo adeegsanayna habka cabbiraadda ballaaran iyo Injineerinka Ku-habboon Baabuurta, Taayirrada Rayone ayaa si gaar ah loogu hagaajiyay gaari kasta, iyadoo sare loo qaadayo daah-furnaanta iyo dhammaystirka taam guud ahaan.
Rayone waa Top 10 Alloy wheels ee Shiinaha, waxay leeyihiin 3 wheels brand, Rayone Wheels, DIM Wheels iyo KS Wheels, waxay caan ku yihiin Aasiya iyo Yurub.Waxaan ku haynaa 800 nooc oo buugaagteena ah, sidoo kale waxaan ku haynaa 15,000pcs bakhaarkeena bil kasta dhamaan macaamiisha dibada ay ka doortaan.
Rayone Racing Wheel Show Room
Taxanaha Rayone Racing wuxuu daboolayaa 13-24 inch taayirada naqshadeynta suuqa kadib, laga bilaabo naqshada mesh-ka caadiga ah ilaa naqshadda shan-hadal ee caanka ah, Rayone wheels waxaa ka go'an horumarinta iyo naqshadeynta qaabab cusub, celcelis ahaan, 15-20 noocyo kala duwan oo taayiro ah ayaa la bilaabo sanad walba.
Shaagagga DIM wuxuu muujinayaa Rom
Haddii aad ku aragto sanduuqa DIM ee cas iyo madow ee suuqa giraangiraha ee waddan kasta, waxay shaki la'aan ka timid taxanaha DIM ee rayone.Taxanaha DIM aad ayuu caan uga yahay Aasiya iyo Koonfurta Ameerika, in ka badan 20 ka ganacsadayaal cusubina waxay isticmaalaan kartoonnadayada DIM ee taayirrada bil kasta.
Qolka Bandhiga Taayirrada KS
Taxanaha KS ayaa hadda lagu heli karaa 8 nooc, oo matalaya qaabab iyo waaya kala duwan.Taxanaha KS waa taxane cusub oo loogu talagalay in lala kaashado shirkadda taayirrada ee Japan, waxay leeyihiin waxqabadka sare iyo xoogga taayirrada ka sarreeya halbeegga JWL ee Japan, maalmahan KS ayaa caan ku ah Yurub iyo Australia, waxayna wacdaro ka sameeyeen isu soo baxa Australia .
Qalab sax ah ayaa lagu gaaraa iyadoo laga cabbiro in ka badan 100 xog oo kala duwan oo ku wareegsan baabuurka.Cabbiraadahaasi waxay horseedaan moodooyinka CAD ee lagu tijaabiyay iyadoo la isticmaalayo Falanqaynta Cunsurka Dhamaystiran (FEA) si loo hubiyo u hoggaansanaanta JWL iyo VIA iyadoo la kordhinayo miyir-beelka.Shaag kasta waxaa si gaar ah loogu sameeyay samaynta iyo moodka gaadhi kasta.
Naqshad kasta oo giraangiraha Rayone waxaa lagu tijaabiyaa jir ahaan iyadoo la raacayo heerarka JWL iyo VIA.Isticmaalka softiweerka Falanqaynta Culeyska Dhamaystiran (FEA) taayir kasta waxa uu maraa gees-goynta, shucaaca, iyo tijaabinta saamaynta gaarka ah ee gaadhiga.
In ka badan 100 cabbir ayaa laga soo ururiyay baabuur kasta, oo ay ku jiraan qiimaynta miisaanka iyo qaybinta, si loo go'aamiyo shayga ugu yar ee shaag walba looga baahan yahay.Marka laga reebo Taxanaha Saxda ah, dhibicda dhexe, xuddunta, iyo dhexroorka korka ee korka ayaa gaar u ah qaabka boodhka ee baabuurka, taas oo u oggolaanaysa dhimista miisaanka dheeraadka ah.
Rayone's Vehicle Tailored Engineering wuxuu hubinayaa in gaarigaagu uu gaari doono qaabkiisa ugu wanagsan iyo waxqabadkiisa.Taxanaha Taxanaha Saxda ah kasta waxa loo farsameeyay inuu ka sarreeyo shaagagga OEM ee uu beddelayo, taam ahaanshiyaha ugu dambeeyana waxaa lagu gaaraa iyadoo la tixgelinayo ballaca ugu sarreeya, ka-goynta, iyo gabbaadka ugu badan ee cabbirrada baabuurka ay oggolaan doonaan.
Awoodda wax-soo-saarka bilaha ah ee giraangiraha Rayone waxay gaartaa 100,000 oo xabbo, oo leh wadar ahaan 10 khadadka wax-soo-saarka.Dhammaan taayirrada waxay maraan aqoon-is-weydaarsiga dheellitirka firfircoon, aqoon-is-weydaarsiga raajada, aqoon-is-weydaarsiga qallafsan, aqoon-is-weydaarsiga, iyo sidoo kale waaxda rinjiyeynta, qolka baaritaanka saameynta, iyo ugu dambeyntii waaxda QC, halkaas oo lagu tijaabiyo laguna aqoonsado ka hor inta aan lagu iibin dibadda.
Soo saarista taayirrada ugu fiican ee warshadaha waxay ku bilaabataa wax aan ahayn alaabta ceeriin ee ugu fiican, oo laga sameeyay Shiinaha.Taayirrada Rayone Racing waxay ka samaysan yihiin A356.2 aluminium heer sare ah oo loo sameeyay naqshad taayir leh.Kuleyl lagu daaweeyay daacadnimo dheeri ah, taayiradan tartanka tayada waxay la mid yihiin marmarna ka weyn yihiin alaabta ceeriin ee ay adeegsadaan baabuurta OEM-yada ugu sarreeya adduunka.
Marxaladdan wax-soo-saarka taayirka nakhshaddiisa ayaa la daaha ka qaaday halka mashiinnada CNC ay ka saarayaan wax yar oo ah 0.02” oo walxo ah baaskiiba si loo gaaro saxnaanta ugu sarreysa.Noocyo gaar ah oo sifooyin miid ah oo qalafsan ayaa tilmaamaya Taxanaha Saxda ah, halka taxanaha kale ee Rayone Racing ay leeyihiin tafaasiil la mid ah inta lagu jiro.
Rayone Wheels waxay taageertaa habayn buuxda, sida habaynta PCD, ET customization, CB customization, iyo sidoo kale adeegyada habaynta habka midabka, habaynta xarfaha iyo astaanta, tirada ugu yar ee dalbashadayadu waa 120 xabbo oo nashqad kasta ah, wakhtiga wax soo saarkuna waa ilaa 40 maalmood.
Taayir kasta oo Rayone ah waxa uu maraa habka xakamaynta tayada dhamaystiran min tuurista ilaa dhamaystirka waxana uu gudbaa imtixaanada wheel JWL & VIA ee ugu adag.Taayirrada Rayone waa la dammaanad qaaday saddex sano waxaana oggolaaday dhammaan ganacsatadayada.
Saxnaanta waxay u baahan tahay joogtayn iyo joogtayn waxay u baahan tahay xakameyn, waana sababta Rayone uu si taxadar leh u kormeero taayir kasta inta lagu jiro tallaabo kasta oo habka.Mashiinnada Rayone waxay ku sameeyaan kormeero taayir kasta si ay u hubiyaan saxnaanta ka hor intaysan u gudbin tallaabada xigta.Kooxda xakamaynta tayada waxay xaqiijisaa cabbir kasta oo muhiim ah iyadoo loo eegayo naqshadaynta injineernimada oo faahfaahsan.Runout, oo ah cabbiraadda wareegga wareegga giraangiraha, waa cabbirka ugu muhiimsan.Rayone Racing wheels waa la hubiyaa si loo xaqiijiyo in orodku uu ku jiro dulqaad.
Wax soo saarka degdega ah